“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၆)
“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၆)
Posted by aye.kk on Jul 17, 2012 in My Dear Diary |7comments
ကေ ပြော လိုက် သော အ ကြပ် ကိုင် စ ကား ကြောင့်……
တုန် လှုပ် သွား သူ က အစ် ကို သု ခ ပင် ။
ပြော ပြ ချင် ပြီး ပြော မ ထွက် ဖြစ် နေ သူ ၊ အစ် ကို သု ခ အား ၊ ကေ မှ
အား မ လို အား မ ရ ဖြစ် ခါ ၊ ပြော ပြ ပေး ရန် ထပ် မံ ပူ ဆာ နေ မိ ပါ သည် ။
ကေ ထင် ထား သည့် ကိ စ္စ ဘဲ မ ဟုတ် လား ဟင် ….
အစ် ကို သု ခ ၊ ကေ မေး နေ တာ ကြား ပါ တယ် နော် ။
ပြော စ ရာ စ ကား တို့က ၊ဘဲ ဥ အ စ ရှာ မ ရ သ လို ။
ကေ့ စိတ် ကို စိုး ရိမ် ပူ ပန် ပြီး ၊ တုန် လှုပ် နေ မိ သည့် အစ် ကို သု ခ က တော့ ဘာ ပြော ရ မှန်း မ သိ ဖြစ် နေ သည် ။
မ သိ အောင်း မေ့ ပြီး က တိ တောင်း ပြီး ခါ မှ ၊ ထို အ ဖြစ် မျိုး ကြုံ ခဲ့ သည့် ကိစ္စ ။ ကေ့ နှိုက် ရှိ ခဲ့ သည် ကို လည်း ကေ ထံ မှ ၊ နှုတ် ထွက် စ ကား အား ကြား လိုက် ရ သ ဖြင့် အံ့ ဩ ပြီး ကိုယ့် နား ပင် ကိုယ် မ ယုံ နိုင် ။
ကေ့ အား ကြည့် ပြီး ၊ အစ် ကို သု ခ တ ယောက် သ နား သွား ပါ သည် ။
ထို စ ကား မျိုး အား ကေ့ အား ထပ် ပြော ပြ ရန် အား ပင် မ ရှိ ။ ဖြစ် မှ ဖြစ် ရ လေ တယ် ကေ ဟု ငြီး တွား ပြီး ဆို ပါ သည် ။
သူ ချစ် သော ကေ က နီး လျှက် နဲ ့၊ က မ္ဘာ အ ဝေး တ ဖက် မှာ ။
မျှော် မှန်း ၍ က မ ရ နိုင် ။ ဆယ် က မ္ဘာ မျှ မ က ဝေး ကွာ လွန်း လှ သည် ။
အ ခြေ နေ က ထင် သည် ထက် ပင် ၊ ပို ဆိုး ဝါး နေ မှု အား တွေး ပြီး ၊ ကေ့ ချစ် ခြင်း အား ၊ ခံ စား ရ မည် ဆို ပါ လျှင်……
အ ချစ် တော် နေ ရာ ၊ ကိုယ် သာ ဖြစ် ချင် ပြီး ၊ နေ ရာ ခြင်း လဲ ယူ ချင် မိ သည် ဟု ကေ့ အား အစ် ကို သု ခ မှ ဖွင့် ပြော ပါ တော့ သည် ။
ထို စ ကား အား ကြား ရ သော အ ခါ …
ငို ချင် ရက် လက် တို့ဖြစ် နေ သည့် ကေ က ၊ ဒေါ သ တို့ခ ဏ ပျောက် ပြီး ၊ အ ရေး ထဲ မ ဖြစ် နိုင် တာ တွေ ကို ၊ အစ် ကို သု ခ လာ ပြော နေ ပြန် သေး တယ် ။ ဘာ မှန်း လည်း မ သိ ဘူး ဟု ဆို ပြီး ပြန် ပြော ခဲ့ မိ ပါ သည် ။
ခ ဏ အ ကြာ …..
အ ဒေါ် ဈေး မှ ပြန် ရောက် လာ ၍ ၊ နှစ် ယောက် သား ပြော စ ရာ စ ကား များ ရပ် လိုက် ကြ ပြီး ၊ တိတ် ဆိတ် ငြိမ် သက် သွား ပါ သည် ။
အ ဒေါ် က နင် တို့နှစ် ယောက် ပျင်း နေ ကြ လား ဟု မေး ပါ သည် ။
ဒါ ဆို လည်း ငါ ဈေး ဝယ် က ပြန် လာ တဲ့ ၊ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် တွေ သင် ကူ ကြ ဟု ဆို ခါ ၊ ပြော ပြော ဆို ဆို ဖြင့် ၊ ဟင်း သီး ၊ ဟင်း ရွက် များ အား ၊ အ ရှေ့ စား ပွဲ ပေါ် တွင် လာ ချ ပေး သွား ပါ သည် ။
နှစ် ယောက် သား ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် သင် ကူ ပေး ရင်း ၊ ည နေ ကျ ရင် ၊ ထ မင်း စား ပြီး လမ်း လျှောက် ရ အောင် ဟု အစ် ကို သု ခ က ၊ စ ကား စ တင် ပြော ပါ သည် ။
အင်း ပါ …ဟု ပြော ပြီး ၊ ကေ က ခေါင်း ငြိမ့် ပြ လိုက် ပါ သည် ။
အ ဒေါ် ပြင် ကျွေး သည့် ည နေ စာ ထ မင်း အား ၊ စား ပြီး သည် နှင့် ၊ အောက် ဆင်း ပြီး ခ ဏ လမ်း လျှောက် ချင် သည် ဟု အ ဒေါ် အား ခွင့် တောင်း ခါ ၊ နှစ် ယောက် သား အောက် ထပ် သို့ဆင်း လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။
လှေ ခါး တ ဝက် အ နီး ရောက် လျှင် ၊ အစ် ကို သု ခ မှ ကေ ထင် သည့် ကိ စ္စ က မှန် နေ လျှင် …
ဘယ် လို ဆုံး ဖြတ် မ လည်း ဟု မေး ပါ သည် ။
ကေ က တော့ လုံး ဝ လက် သင့် မ ခံ နိုင် ပါ ဘူး ။
အ ဖေ တို ့ရဲ ့ရိုး ရာ အ ရ ပြု လုပ် လည်း ဘဲ ၊ ကေ က တော့ …..
အ ဒေါ် အား သေ သေ ချာ ချာ ရှင်း ပြ ပြီး ၊ လက် ခံ နိုင် အောင် ပြော ပြ မယ် ။
ဘာ လို့လည်း ဆို တော့ ၊ ကုန် တင် လော် လီ ကား ရှေ့ထိုး ဝင် ပြီး ရပ် တဲ့ ကိ စ္စ က ၊ အ ဖေ ကို ယ် တိုင် က နောင် ဒီ လို ကိ စ္စ မျိုး အ တင်း အ ကျပ် မ လုပ် တော့ ပါ ဘူး ဆို တာ ဂ တိ ပေး ထား တာ နား နဲ ့ကိုယ် တိုင် ဆက် ဆက် ကြား ထား ပါ တယ် ။ ကား အုံ နာ ပိုင် ရှင် က အ ဖေ့ မိတ် ဆွေ ၊ ကား ဒ ရိုင် ဘာ က လည်း ကေ့ ကို ငယ် ငယ် ထဲ က ခင် မင် လာ တဲ့ သူ ။ တိုက် ဆိုင် သွား တာ လည်း ပါ တာ ပေါ့ နော် ။
ကေ့ အ သက် ကို ကယ် လိုက် တာ ။ ကား မောင်း အ ရမ်း ကျွမ်း ကျင် ပြီး ၊ ရုတ် တ ရက် ကား စ တီ ယာ ရင် လက် ကိုင် ကို ထိန်း ပြီး ကား ကို ဘေး ထိုး ချ ပြီး ကွေ့လိုက် ရ တယ် ။ ကား လည်း တိမ်း စောင်း ပြီး မှောက် လု မှောက် ခင် ဖြစ် သွား တာ ။ ဆီ တိုင် ကီ လည်း တစ် ခု ခု ဖြစ် သွား တာ ကို အ ဖေ့ ကို ပြော ပြ တာ ။ ကေ သိ ခဲ့ ရ တယ် ။
ကေ လည်း အဲ ဒီ အ ဖြစ် ကို မျက် လုံး ထဲ မြင် ပြီး ၊ ငယ် သံ ပါ အော် ဟစ် ရင်း မေ့ ပြီး လဲ သွား တယ် ။ ဒ ရိုင် ဘာ လည်း ကေ့ ကို ၊ ကိုယ် တိုင် ပွေ့ချီ ပြီး ၊ အိမ် ပြန် ရောက် လာ ခဲ့ တာ ကို ဘဲ သိ လိုက် ရ တော့ တယ် ။
အိမ် က လူ တွေ ကေ့ ကို သ တိ ပြန် ရ အောင် ခြေ မ ချိုး ၊ လက် မ နှိပ် ၊ ယပ် ခပ် ကြ နဲ ့အား လုံး အ လုပ် ရှုတ် ကုန် ကြ တယ် ။
အ မေ က တော့ ၊ မာ လ ကာ ပင် က အ ရွက် နဲ ့သွေး ဆေး ၊ လက် ထဲ လုံး နယ် ပွတ် ချေ ပေး ပြီး ၊ နှာ ဝ နား တေ့ ထား ပေး တယ် ။
အဲ လို ဝိုင်း လုပ် ပေး ကြ မှ ကေ လည်း သ တိ ပြန် ရ လာ ခဲ့ တာ ။
ကေ နဲ ့ခင် တဲ့ ဒ ရိုင် ဘာ လည်း ၊ ကေ သ တိ ပြန် ရ မှ စိတ် အေး လက် အေး ပြန် သွား နိုင် ခဲ့ တယ် ။
ကေ လည်း တ သက် လုံး သူ့ကျေး ဇူး ကို မေ့ လို ့ရ မယ် မ ထင် ဘူး ။
အ ဖေ က တော့ ဆီ တိုင် ကီ ဘိုး ပြင် ဘို ့အ တွက် ငွေ ထုတ် ပေး လိုက် တယ် ။ဒါ တောင် မ ယူ ဘဲ ငြင်း နေ သေး တာ ။
အ ဖေ က မင်း မ ယူ ရင် ၊ ကား မောင်း တဲ့ လ စာ လုပ် အား ခ ထဲ က ဖြတ် နေ ရင် မိ ဘ တွေ ကို သွား ထိ ခိုက် မှာ ပေါ့ တဲ့ ။ သူ က ငယ် ငယ် ရွယ် ရွယ် နဲ့ ့မိ ဘ တွေ ကို ရှာ ကြွေး နေ တဲ့ သူ ။
မ ယူ ရင် မ ရ ဘူး ဆို ပြီး ၊ အ ဖေ က အ တင်း ပြော တော့ မှ ငွေ ကို လက် ခံ ယူ ပြီး ပြန် သွား တယ် ။
အ ဖေ့ ကို လည်း အ ကျိုး ကြောင်း မေး ပြီး ၊ အ တင်း အ ကျပ် မ လုပ် ဖို ့၊ က တိ အ ထပ် ထပ် တောင်း သွား ခဲ့ သေး တယ် ။
သူ က လူ သိ မ ခံ ဘဲ ၊ ကေ သ တိ မေ့ နေ တာ ကို အိမ် တိုင် ယာ ရောက် ထမ်း ပြီး လာ ပြန် ပို ့ပေး သွား ခဲ့ တာ ပါ။
ကေ တို ့မြို့က ၊ မြို့စွန် နဲ ့မြို့ဖျား အ လည် တည့် တည့်မှာ က ဘု ရား ဝိုင်း ကြီး ရှိ တယ် ။ လူ နေ အိမ် ခြေ မ ရှိ ပဲ ၊ လူ သွား လူ လာ ပြတ် လပ် တဲ့ နေ ရာ မျိုး ။ ဆိုက် က္ကား ၊ မြင်း လှည်း နဲ့ခေါ် ပြီး တင် ရင် ၊ ဆေး ရုံ ပို့ရင် ၊ လူ သိ ရှင် ကြား ဖြစ် သွား မ လား စိုး ရိမ် စိတ် ပူ တယ် ပေါ့ နော် ။
သူ လည်း ကိုယ့် အ သက် နဲ ့ရင်း ပြီး ကယ် လိုက် ရ သ လို ဖြစ် သွား တာ ။ ကေ က မေ့ ယုံ တင် မေ့ သွား တဲ့ သူ ။ (သူ လည်း ကြက် ခြေ နီ ခေါင်း ဆောင် မြို့နယ် အ ဖွဲ့ဝင် တစ် ဦး ပါ ) ။
ကေ က ဒဏ် ရာ အ ပွန်း ပဲ့ တောင် တ ချက် မ ရ လိုက် ပဲ ၊ ဘာ ဒဏ် ရာ မှ လည်း မ ရ တော့ …
အ ရှည် အ ရှည် ဖြစ် နေ မှာ စိုး တာ ရယ် ၊ အ ဖေ က လည်း သူ တို့မိ သား စု တွေ ကို ၊ တစ် ကြိမ် တစ် ခါ တုံး က စောင့် ရှောက် ဘူး တာ ရယ် ၊ အား လုံး ပေါင်း စုံ သွား တာ ပေါ့ နော် ။
ကေ့ ကို ငယ် ငယ် လေး ထဲ က ရင်း နှီး ပြီး ၊ ကြက် ခြေ နီ မှာ လည်း ကေ့ ရဲ ့နည်း ပြ ဖြစ် ဘူး ထား တော့ ၊ အ ရမ်း ခင် နေ တာ ဆို တော့ လေ..။
ဒီ အ ကြောင်း တွေ နဲ ့ပတ် သက် ပြီး ၊ တ သက် လုံး ရေ ငုံ နှုတ် ပိတ် နေ ပေးသွား ပါ့ မယ် လို ့လည်း ပြော တယ် ။
ဒီ ကိ စ္စ ဖြစ် သွား တာ ၊ ကေ တို့မြို့က အ ခြား သူ ဘယ် သူ တွေ မှ တောင် သိ လိုက် ပုံ မ ပေါ် ဘူး ။
မိ သား စု လောက် ပဲ သိ တာ ၊ အ ဒေါ် တောင် ကြား တာ ပဲ ရှိ မယ် ။ ဘေး အိမ် တွေ က လည်း ဃ ဂ န န မ သိ ကြ ဘူး ။
ဪ ဒီ လို တွေ အ ထိ တောင် ဖြစ် ခဲ့ ကြ တာ လား…ကေ ။
ဟုတ် တယ် လေ ။
ပြော ရင်း နှင့် ပင် လှေ ခါး အ ဆင်း ထိ ရောက် လာ ကြ ခါ ၊ နှစ် ယောက် သား က န္နား လမ်း ဘက် သို့ဆက် လျှောက် လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။
ကို အ ဒေါ် ပြော ပြ တာ က ၊ ကိုယ် နဲ့လည်း ညီ အစ် ကို တ ဝမ်း ကွဲ တော် တဲ့ ၊ ကိုယ့် အစ် ကို သ င်္ဘော သား တ ယောက် ကို ၊ ကေ နဲ့စေ့ စပ် ယုံ ပြု လုပ် ထား ပြီး အ ရွယ် ရောက် မှ ပေး စား မှာ ပါ တဲ့ ။
ကေ့ ကို ပြော ဖြစ် မ ဖြစ် တော့ မ သိ ဘူး ။ အ ဒေါ် က ကေ့ ရဲ ့အ ဖေ ကို စ ကား ကြောင်း လမ်း ထား တာ လောက် ဘဲ သိ ရ တာ ။
အ ချစ် တော် ထား တဲ့ ကိ စ္စ နဲ ့ပတ် သက် ပြီး ၊ ကေ့ ကို အ ကြီး ကျယ် တား မြစ် ကြ ရင်း ၊ ဖြစ် လာ တဲ့ ပြ ဿ နာ တွေ ပါ ဘဲ ။
အစ် ကို သု ခ လည်း ကေ့ အ ချစ် တော် ဖြစ် ချင် ရင် …
ဆို ပြီး ထပ် ပြီး ပြော မ ထွက် မိ တော့ ပါ ။
ကေ တောင် မှ ည အိပ် ရာ ဝင် တိုင်း ၊ ယောက် ကျား လေး ဖြစ် ရ ပါ စေ လို ၏ လို့ရှိ ခိုး ပြီး တိုင်း အ ကျယ် ကြီး အော် ပြီး ဆု ထဲ့ တောင်း တတ် တာ ။ အိမ် က လူ တွေ ဆို ကေ့ ကို တ အား နား ကြား ပြင်း ကပ် ကြ တာ မ ပြော ပါ နဲ ့တော့ ။
ဆယ် ကျော် သက် လာ တဲ့ နောက် ပိုင်း ၊ စိတ် က တ ချိန် လုံး ယောက် ကျား လေး ပဲ ဖြစ် ချင် နေ ခဲ့ မိ တာ အ မှန် ပါ ဘဲ ။
မိန်း က လေး ရုပ် ရည် နဲ့ယောက် ကျား လေး လို အ တု လိုက် လိုက် ခိုး နေ လို ့၊ အ မေ ရော အစ် မ ပါ ကေ့ ကို လုံး လုံး ကြည့် မ ရ တော့ ပဲ ၊ ရိုက် ရ တဲ့ အ ထိ ဖြစ် လာ ကြ တာ…။
အစ် ကို သု ခ ၊ ကေ့ ကို ချစ် မိ လို့က တော့ ၊ ဓါတ် ပုံ ကို သာ ဖက် ပြီး အ ရိုး ထုတ် မှ ပဲ ရ တော့ မှာ ။
ကေ က အိမ် ထောင် ပြု ဘို ့နေ နေ သာ သာ ။ မိန်း က လေး စိတ် ဝင် ဘို ့က ကြိုး စား ယူ ရ ဦး မှာ ဆို တော့ လေ ။
က မ္ဘာ လ ဆန်း တ ရက် နေ့ထိ ၊ စောင့် နိုင် ရင် စောင့် ပေါ့ နော် ။။
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာ သွားသတိရမိတယ်။
သူငယ်ချင်းက မောင်နှမ ၂ ယောက်တည်း ရှိတာ။
သူ့ညီမလေးကို အိမ်ထောင်မချပေးဘူးလားလို့ မိတ်ဆွေတွေက မေးကြတယ်။
သူကြိုက်ရင် ငါက အိမ်ထောင်ချပေးမလို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် သူက ယောကျင်္ားလိုချင်တာ မဟုတ်ပဲ မိန်းမ လိုချင်တာ ဖြစ်နေတယ် တဲ့။ :[:D]
အော်… ကေငယ်ငယ်ကလည်း ယောက်ျာလေး စိတ်ပေါက်ခဲ့တာပေါ့။
အချစ်တော်ထားခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ခုတော့လည်း အိမ်ထောင်ရက်သားကျလို့ သူ့ဟာနဲ့ သူပြောင်းလဲသွားကြတာပါပဲ။
ကေ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေဖတ်ပြီး ကေ့ကို ချစ်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ ဖူးစာမဆုံခဲ့ဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ
ကေက ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပဲ(ကေကပဲ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်တဲ့သူ)ဖူးစာဆုံခဲ့သလားလို့ခန့်မှန်းကြည့်မိတယ်…
ကေက တဖက်က အချစ်တော့ အတော်ခံရပုံပေါ်တယ်..အချစ်ခံရပေမယ့် အဲဒီတဖက်သားအပေါ် ခံစားချက်တွေကိုလည်း ဖုံးဖိထားနိုင်တယ်လို့ ထင်တယ်…နှင်းနှင်းတစ်ယောက်ထဲအမြင်အနေနဲ့
True Story ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Fiction ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Main Character ကေ့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကို
ဒီ့ထက် ပေါ်လွင်အောင် ရေးဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူကို ပိုပြီးဆွဲခေါ်သွားမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်
ဖြစ်သွားမယ်လို့….ခံစားမိပါတယ်…ဒီနေ့ထပ်တင်ပေးလို့ Thank you ပါ…စောင့်မျှော်နေတာပါ….
တယောက်ကိုတယောက်ပုခုံးချင်းသိုင်းဖက်လို ့ရယ်ရယ်မောမောပျော်ရွှင်စွာနဲ ့အတူတူဆောင်း။
ဒီတစ်ခါ နဲနဲကြာသွားတော့ မနဲပြန်စဉ်းစားရတယ်ဗျို့
ကေ့ ကို သတိရလို့ ပြန်ရှာဖတ် ရတာ။
ကေ က တဇွတ်ထိုး လေးထင်ရဲ့။
ဒီ တဇွတ်ထိုးလေး ကေ ဘယ်သူ့ ဆီမှာ ကြွေသွားမလဲ သိချင်ပါရဲ့။
မြန်မြန်လေး ဆက်ပါဦး။ :-)